Ekuphileni, sivamile ukuzwa: "Lo muntu has amakhono yenhlangano Lokhu kuhle, zize.". Kodwa yesibili Akakwazanga ngisho ukuhola iqembu elincane, nakuba, futhi umdlali omuhle, kodwa lutho. Kuba nentshisekelo ukuthi kusho ukuthini lokhu definition lesifinyetiwe? Ngamanye amazwi, iziphi izimfanelo okufanele abe umuntu ukuthi ithuthukiswe la makhono efanayo? Kungenzeka yini ukuqeqesha, noma zinikelwe ngokwemvelo? Ngakho, namuhla sisuke sicabanga amakhono ukuhlela. Lena sihloko sasivumela olunzulu, kodwa kakhulu.
Ake sizame ukuchaza
Uma uthi nhlá, yonke into icacile: shazi le ndoda, futhi ngisho ukuziphatha kwakhe kubonisa, wabahola abantu noma cha. Kodwa uma udinga ukwakha incazelo ke kuphakama izinkinga. Ngakho, amakhono yenhlangano - iqoqo izimfanelo azosiza umuntu ukuhlela umsebenzi nakahle, kokubili ozakwabo kanye. Sekuvele kancane sobala. Kuyini lokhu izinga, indlela ukukala futhi kungani eziningi kubo, futhi ezinye neze?
Nalapha babengamhloniphi incazelo eqonde kakhulu, bezama phansi ku izingxenye zalo. amakhono yenhlangano - iqoqo izimfanelo ukuthi sesingene nawe futhi ukuqoqa "kopilochku", okuyilona elidingekayo ukuze umuntu kumiswa imiqondo jikelele:
Authority - ikhwalithi lokuqala ngokuthi umuntu othile kumelwe ifa. Kunzima 'ukungakhathazeki ukuvumelana. Uma igama lakho asithenjiwe ngokungenamibandela, bese senza ngokuhambisana nemiyalelo kuzobonakala kuphela ngenxa usongo isijeziso, futhi ngisho nangalesosikhathi ngaphandle isifiso. I ukuthembeka zingenza ukudalula eminye. Efaneleyo, engasenathonya futhi okuningi.
WezobuLungiswa kanye okukhulu. Umholi kweqiniso kumelwe bakwazi abstract kusuka imizwa yabo futhi isenzo ngokuvumelana nala mazwi anengqondo futhi isimo. Lena ubulungiswa okuzelwe kanjani, ukuthi wazizwa nxazonke. Ngisho okukhulu anda boss ngeke wafiphaza, kodwa kunalokho, kuzonezela ukuthembeka.
Ukuxhumana namakhono yenhlangano - yikhono lokuxazulula izingxabano ngokukhalipha. Eqenjini ayinakugwenywa, ngakho kudingeka ukuba bakwazi ukulalela zombili, okuba ngingathathi hlangothi nokwenza isinqumo oyoletha ukuthula.
Ukudluliselwa igunya nokulawula. Lokhu aerobatics, ngawo ungakwazi ahlulele kahle kwakhiwa kanjani yenhlangano amakhono indoda. Ngokuqinisekile unawo wonke wazibona abantu abangakwazi ngisho ukuhlela isikhathi sawo. Sinenkosi kweqembu izinkinga, banamathela eyodwa, kwesibili, kwesithathu, esikhululekile bengenzi lutho ukuthola itafula, chaos ikhanda lami. Kuzokwenzekani uma uyinika e kwakuwukuthi abantu? Kungokufanayo, bayoba abanqotshwa izinto ezingadingekile, ngaphandle kokuba ukuze uveze iphuzu. Sekuyinto enye into uma ubona ukuthi ekuseni indoda yenziwa uhlelo umsebenzi, uhlela kweseshini behlangene, basakaza imisebenzi okuyiwona ngamunye uzocelwa kusasa. Wonke umuntu imatasa nge izindaba zabo, akekho ezisheshayo.
Azalwa naso noma bathenga
Njengoba ubona, umqondo zaphumela ngempela capacious. Masibheke kwalokho amakhono yenhlangano kanti ngokwemvelo bangabantu, futhi lapho akhiqizwa enkambweni yokuphila? Asikwazi zonke ukujabulela konke abalwe ngenhla. Nokho, ngaphambi nje ngakho musa bawe. Udinga ukufunda ubuthishela, kudlule indlela nzima amakhosi of izikebhe zabo. Noma yini ongase abe abanamakhono futhi une-saqala ngokuphelele futhi namanje lolungenamaphutsa ukuhola iqembu ngeke baphumelele akusho. Ake ucabange ngako, ngangiyokwaneliswa bayinqoba impi, uStalin, uma wayengeyona owaleli ekhaliphile umuntu tech-savvy. Phela, kwadingeka ukuba enze isinqumo sokuthi ukwethulwa ukukhiqizwa uhlobo oluthile isikhali, ukulingana kwamandla kanye nokunye okufana nalokho. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi isipiliyoni ngisho imisebenzi yabo nzima ukuhlela. Ngakho-ke, yiba nesineke futhi uqale kusukela yokuzithiba, nakho konke okunye kuyofika.
Ukuthuthukiswa kwamakhono yenhlangano
Ayanda wena emsebenzini, kulapho ukuzethemba. Kodwa ngezinye izikhathi isisebenzi abanekhono ukhiqiza imibono brilliant, akusiyo ukwazi sizisebenzise kahle. abantu yokudala kanye nochwepheshe ikakhulukazi kungaba nzima ngenxa yokuntuleka emakhonweni. Ukudlala indima kanye nemikhawulo yalo, izithiyo ezingokwengqondo, amahloni futhi ehlala kude, ukwesaba ukuthi uzolahlwa, yokuzingabaza. Kulokhu, kubalulekile ukuze ujike kudokotela wengqondo ngiyofuna noma Umeluleki. Kuyasiza zifezeke izinkinga zangaphakathi kanye ukufinyelela ezingeni entsha yentuthuko.
Ukususa imingcele yangaphakathi - lena nje omunye izinhlobo zomsebenzi. Ngaphandle ukuxhumana okuqondile e iqembu awukaze ngizolivusa ezingeni yekuchumana. Hlobo luni amakhono yenhlangano, uma umuntu sibomvu okhanyayo, hhayi ungabiza noma ucele uzakwabo kuye umphumela umsebenzi?
Ngakho, ukukhuluma kwakho, phinda ekhaya, kanye nomndeni kanye nabangane. Ngisho kangcono kungaba uma ubhalisele trainings ku ukuzethemba kanye namakhono okuxoxa. Lapha umqeqeshi ezohlinzeka imisebenzi, zonke okwandisa izinga labo eyinkimbinkimbi. Futhi ukuqhuba ifomu micro-amaqembu abo. Khuluma efanele futhi emsebenzini. Okokuqala, ne nozakwethu abaseduze, bese kancane kancane ukwandisa emjikelezweni yekuchumana.
Amathiphu ngamunye wenu
amakhono yenhlangano akhiwa ikhanda nebystro. A professional abasha ingandiza ngokusebenzisa kwababusi ngenxa engasenathonya siqu, Ukukhalipha, okungukuthi izimfanelo esingokwemvelo, ubunjalo idatha. Kodwa qinani idolo uma ihlukile. Ukuze entfutfukweni yabo, sebenzisa la macebiso:
Qala ukuthuthukisa inhlangano wazikhulekela ngokuthi: 'ukuphila kwakhe siqu emsebenzini.
Hlela bese ucabangisise zonke izinto ezizokwenzeka.
Letha zokuhamba komsebenzi wakho siqu ekupheleleni. Kumele ihlelwe ukuze lube yimpumelelo ngangokunokwenzeka ngomzamo etshaliwe.
Manje kancane kancane qhubeka. Qalaza emaceleni: indlela ahlele umsebenzi lo Mnyango ukwazi imisebenzi yayo kube okuphumelela kakhudlwana?
Lezi zindlela ezilula zenza kuzosiza okwesikhashana ukuze kumile umsebenzi ojwayelekile ukuze umqondisi bahlukana kakhulu, okuzoba eyabonisa imiphumela ayifani. Phela, uma wenza kanjalo, qiniseka ukuthi wena kahle.
Nokho, ukuze abone ikhono ukwakha lonke ibhethri tivivinyo, iningi lawo besiyoba sikhulu kakhulu kubo njalo ingasetshenziswa. Ngakho-ke, kungaba nemakhono lasetulu yenhlangano zihlolwe Ngemizuzwana, wedwa futhi imahhala. njalo abaholi ubambelela iqoqo elilodwa lezimiso ezifaka nobulungiswa nokulingana, ukungakhethi, isithunzi, nokwethenjelwa. Futhi ukuhlola umthamo wabo ngobuholi ngokusebenzisa nenqubo elandelayo:
Okuqhubekayo self-ngcono. Uma ungenalo zenzele wena, awukwazi sishukumisele abanye.
Umumo kuya ekukhonzeni abanye. Kunoma isiphi isimo, kufanele uzibuze ukuthi okudingayo omunye kini, ngaphandle kwalokho kuyadingeka ngawe uqobo.
Kushisa bhé kule ndawo wamandla omuhle futhi ukuthakazelelwa yiyo futhi kugwenywe Imibono engemihle.
Ukholo abanye. Umholi kufanele ubone ukubaluleka kwako futhi quality enhle.
Ukwabiwa okunengqondo isikhathi nomzamo.
ukuzethemba Inner nangombono omuhle.
Self-ukugxekwa, ukubekezelelana ukuqashelwa abanye.
Hhayi kakhulu, kodwa iningi lethu baqaphele ukuthi ukuphila kuphela izinzuzo + zabo siqu, ukukuziba lokho abanye. Ungamangali, izwe usabela uhlobo.
kokuhlaziywa Simple futhi ngokwethembeka okungadonsela ngokwakho kuzokusiza uqonde uma ubuholi kanye izimfanelo yenhlangano. Kodwa ngisho noma lokhu akukona ngohlangothi lwakho eziqine, lutho olungalungile kulokho. Akukho ngisho kudingeka abaholi abangakwazi izwi okhela isixuku bhá emhlabeni. Qala nge ngokwakho, etafuleni lakho, nge zokuxhumana yakhe amakhono. Iba professional weqiniso ensimini yabo, funda ukwazisa isikhathi nezinto zethu, futhi amakhono akho yenhlangano edingekayo ukuze sibonakalise.
Igor Mann futhi izincwadi zakhe
Yini ukondla ufudu umhlaba ukuze kube nempilo engcono?
Ukupheka okumnandi round cutlets chops noma inyama nengulube
Ufuna ngokushesha ukuthola icebo kwendaba - ukufunda lapha isifinyezo. "Spring shifters" - kungcono indaba enkulu mayelana ingane